एजिथ्रोमाइसिन बनाम अमोक्सिसिलिन: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि उत्तम छ - औषधि बनाम मित्र | सेप्टेम्बर 2021
समुदाय, कल्याण खेलहरु समुदाय घरपालुवा जनावर औषधि जानकारी औषधि जानकारी, समाचार कम्पनी, समाचार समुदाय, कम्पनी कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा कम्पनी, औषधि जानकारी औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा समाचार, कल्याण प्रेस स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर कम्पनी, चेकआउट
मुख्य >> औषधि बनाम मित्र >> एजिथ्रोमाइसिन बनाम अमोक्सिसिलिन: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि उत्तम छ
यदि तपाईं कहिले ब्याक्टेरियस साइनस संक्रमण वा अन्य प्रकारका ब्याक्टेरिया संक्रमणबाट ग्रस्त हुनुहुन्छ भने, तपाईंले एन्टिबायोटिक लिनुभएको छ। एजिथ्रोमाइसिन र एमोक्सिसिलिन सबैभन्दा दुई मध्ये दुई हुन् साधारण एन्टिबायोटिक ब्याक्टेरिया संक्रमण को उपचार मा प्रयोग। एन्टिबायोटिक जीवाणु संक्रमणको उपचारमा प्रयोग गरिन्छ, र फ्लु वा साधारण चिसो जस्ता भाइरल संक्रमणको लागि काम गर्दैन।
एजिथ्रोमाइसिनलाई यसको ब्राण्ड नाम Zithromax द्वारा पनि चिनिन्छ (तपाईंले Zithromax Z-Pak को बारेमा सुन्नुभएको हुन सक्छ, जुन प्राय: निर्धारित गरीन्छ)। यसलाई म्याक्रोलाइड एन्टिबायोटिक भनिने औषधीहरूको समूहमा वर्गीकृत गरिएको छ। एजिथ्रोमाइसिनले ब्याक्टेरियाहरूलाई बाँधेर ब्याक्टेरियाहरूलाई प्रोटीन उत्पादन गर्नबाट बचाउँछ जुन यसलाई बाँच्न आवश्यक छ। एजीथ्रोमाइसिन सामान्यतया जीवाणु संक्रमणको लागि जस्तै साइनस संक्रमण, निमोनिया, र केहि यौन संक्रमित रोगहरूको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ, केहीको नाम लिन।
अमोक्सिसिलिन यसको ब्रान्ड एमोक्सिल द्वारा परिचित छ, र यसलाई पेनिसिलिन (वा बीटा-लैक्टम) एन्टिबायोटिक भनिने औषधीहरूको समूहमा वर्गीकृत गरिएको छ। अमोक्सिसिलिनले ब्याक्टेरियाहरूलाई सेल भित्ता बनाउनबाट रोक्छ, जसले ब्याक्टेरियाहरूलाई मार्छ। अमोक्सिसिलिन सामान्यतया जीवाणु संक्रमणको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ जस्तै कानको संक्रमण, निमोनिया, र घाँटी संक्रमण, अरूमा।
जे होस् दुबै औषधीहरू एन्टिबायोटिक हो, उनीहरूमा धेरै भिन्नताहरू छन्। अझिथ्रोमाइसिन र एमोक्सिसिलिनको बारेमा बढि जान्नको लागि पढ्न जारी राख्नुहोस्।
एजिथ्रोमाइसिन र एमोक्सिसिलिन बीचको मुख्य भिन्नता के हो?
एजिथ्रोमाइसिन (एजिथ्रोमाइसिन कुपनहरू) एक म्याक्रोलाइड एन्टिबायोटिक हो, जुन यसको ब्रान्ड नाम जीथ्रोमैक्सद्वारा चिनिन्छ। Zithromax फाइजर द्वारा बनाईएको हो। एजिथ्रोमाइसिन (एजिथ्रोमाइसिन विवरणहरू) सामान्यतया ट्याब्लेटको रूपमा एकको रूपमा दिइन्छ Zithromax Z- पाक (छ-ट्याब्लेट, एजिथ्रोमाइसिनको--दिन कोर्स) वा Zithromax Tri-Pak (azithromycin को--दिन कोर्स)। दुबै वयस्क र बच्चाहरूमा प्रयोग, खुराक संकेत द्वारा भिन्न हुन्छ।
अमोक्सिसिलिन (अमोक्सिसिलिन कुपन) एक पेनिसिलिन एन्टिबायोटिक हो, जुन यसको ब्राण्ड नाम अमोक्सिल द्वारा परिचित छ। यद्यपि, Amoxil अब व्यावसायिक रूपमा उपलब्ध छैन, र औषधि जेनेरिक रूपमा मात्र उपलब्ध छ। अमोक्सिसिलिन प्राय जसो अमोक्सिसिलिन क्याप्सूलको रूपमा सिफारिश गरिन्छ, वा क्लावुलनिक एसिडको साथ संयोजनमा (प्रतिरोध रोक्नको लागि) अग्मेन्टिनको रूपमा। अमोक्सिसिलिन (एमोक्सिसिलिन विवरण) सामान्यतया वयस्कहरू र बच्चाहरूमा प्रयोग गरिन्छ, र खुराक संकेतको आधारमा फरक हुन्छ।
यो नोट गर्न महत्त्वपूर्ण छ कि जब तपाइँ एन्टिबायोटिक निर्धारित गर्नुहुन्छ, तपाइँले यसलाई निर्देशितको रूपमा लिनुपर्दछ, र पूरा पाठ्यक्रम समाप्त गर्नुहोस् , तपाईं राम्रो महसुस गर्दै छन् भने पनि। जहाँसम्म, यदि तपाई धेरै दिनदेखि एन्टिबायोटिक लिइरहनु भएको छ र तपाईलाई राम्रो लाग्दैन भने, निर्देशनका लागि तपाईको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
एजीथ्रोमाइसिन र एमोक्सिसिलिन बीच मुख्य भिन्नता
औषधि वर्ग म्याकोराइड एन्टिबायोटिक पेनिसिलिन एन्टिबायोटिक
ब्रान्ड नाम के हो? Zithromax Amoxil, Trimox (अब ब्राण्ड नाममा उपलब्ध छैन)
कुन फार्म (हरू) ड्रग भित्र आउँछ? ट्याब्लेटहरू, सस्पेंशन, इन्जेक्शन, पाउडर प्याकेट,
आँखा ड्रप (AzaSite) क्याप्सूल, निलम्बन, ट्याब्लेट, चेवाबल ट्याब्लेट
साथै: ट्याब्लेट, चेव्वा ट्याब्लेट, र क्लेभुलनिक एसिडको साथ संयोजनमा निलम्बन (amoxicillin-clavulanate) को रूपमा अग्मेन्टिन ; लान्सोप्रजोल र क्लेरिथ्रोमाइसिन प्रेभपाकको रूपमा संयोजनको साथ
मानक खुराक के हो? दिन १ मा Z-पाक २ ट्याब्लेटहरू, त्यसपछि १ ट्याबलेट दिनको २ देखि5सम्म Mg०० मिलीग्राम १० दिनमा एक पटक। पटक
विशिष्ट उपचार कति लामो हुन्छ? Days दिन; फरक हुन्छ -10-१० दिन; फरक हुन्छ
अझिथ्रोमाइसिनमा सब भन्दा राम्रो मूल्य चाहनुहुन्छ?
Azithromycin मूल्य सचेतका लागि साइन अप गर्नुहोस् र जब मूल्य परिवर्तन हुन्छ फेला पार्नुहोस्!
फ्लू हुँदा के खाने?
अजीथ्रोमाइसिन र एमोक्सिसिलिन द्वारा उपचारित अवस्था
वयस्क र बच्चाहरूमा एजिथ्रोमाइसिन विभिन्न प्रकारका ब्याक्टेरियाको संक्रमणको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ (तल सूची हेर्नुहोस्)। यो न्यूमोनियाका बिरामीहरूमा प्रयोग गर्न मिल्दैन जो सिस्टिक फाइब्रोसिस, नोसोकोमियल (अस्पताल-अधिग्रहित) संक्रमण, ज्ञात वा संदिग्ध ब्याक्टेरिया (रगतमा ब्याक्टेरिया), अस्पतालमा भर्ना बिरामीहरू, बुजुर्ग वा दुर्बल रोगीहरू, वा सम्झौता प्रतिरक्षा प्रणाली वा एस्प्लेनियाका बिरामीहरू। (कुनै प्वाल भएन)।
क्रॉनिक ब्रोन्काइटिसको तीव्र जीवाणु exacerbations हेमोफिलस इन्फ्लूएन्जा , मोराक्सेला क्याटरहलिस, वा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया
तीव्र जीवाणु साइनोसिटिस बाट हेमोफिलस इन्फ्लूएन्जा , मोराक्सेला क्याटरहलिस, वा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया
सामुदायिक अधिग्रहित निमोनियाबाट क्लेमाइडोफिला निमोनिया , हेमोफिलस इन्फ्लूएन्जा , माईकोप्लाज्मा निमोनिया, वा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया (वयस्क र months महिना भन्दा बढि बच्चाहरू)
ग्रसनीशोथ / टन्सिलिटिसको कारणले स्ट्रेप्टोकोकस प्योजेनेस पहिलो लाइन थेरापी प्रयोग गर्न नसक्ने बिरामीहरूमा पहिलो लाइन उपचारको विकल्पको रूपमा (वयस्कहरू र २ बर्ष भन्दा बढि बच्चाहरू)
असम्भव छाला / छाला संरचना कारण संक्रमण स्टेफिलोकोकस अउरियस , स्ट्रेप्टोकोकस प्योजेनेस , वा स्ट्रेप्टोकोकस एगालाक्टिया
मूत्रमार्ग र ग्रीवाइटिसको कारण क्लैमिडिया ट्राकोमेटिस वा Neisseria gonorrhoeae
पुरूषमा जननांग अल्सर रोगको कारण हेमोफिलस डक्रेई (chancroid)
तीव्र कान संक्रमण (ओटिटिस मिडिया) (> months महिना को उमेर) को कारणले हेमोफिलस इन्फ्लूएन्जा , मोराक्सेला क्याटरहलिस, वा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया
अमोक्सिसिलिन जीवाणु संक्रमणको विभिन्न प्रकारको उपचार गर्न पनि प्रयोग गरिन्छ:
कान / नाक / घाँटी संक्रमण को निश्चित प्रकारहरु को कारण संक्रमण स्ट्रेप्टोकोकस , निमोनिया , स्टेफिलोकोकस spp।, वा एच। इन्फ्लूएन्जा
Genitourinary पथ संक्रमण बाट कोलाई, पी। मिराबिलिस; वा ई। फेकेलिस
छाला / छाला संरचना संक्रमण को केहि प्रकारहरु द्वारा उत्पन्न स्ट्रेप्टोकोकस स्टेफिलोकोकस , वा ई। कोलाई
केहि तनावका कारण तल्लो श्वास नलिका संक्रमण स्ट्रेप्टोकोकस , S । निमोनिया, स्टेफिलोकोकस , वा एच। इन्फ्लूएन्जा
पुरुष र महिलामा भएको कारण तीव्र असम्भव गोनोरिया gonorrhoeae
को उन्मूलन पाइलोरी ग्रहणी अल्सर पुनरावृत्तिको जोखिम कम गर्न
अमोक्सिसिलिन बिरामीहरुमा लान्सोप्रजोल र क्लेरिथ्रोमाइसिन (प्रेभप्याकको रूपमा) को साथ ट्रिपल थेरापीको रूपमा पनि प्रयोग गरिन्छ। पाइलोरी संक्रमण र ग्रहणी अल्सर
एन्टिमाइक्रोबियल प्रतिरोधको विकासलाई कम गर्न, अजीथ्रोमाइसिन वा एमोक्सिसिलिन केवल ब्याक्टेरिया संक्रमणमा प्रयोग गर्नुपर्नेछ जब तपाईको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकद्वारा उपयुक्त हुने निर्णय गरीन्छ। वास्तवमा, रोग नियन्त्रण र रोकथामका लागि केन्द्रहरू ( CDC ) स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरूलाई सही एन्टिबायोटिक (सही खुराक र अवधि सहित) छनौट गर्न र अनावश्यक एन्टिबायोटिक प्रयोग घटाउन मद्दत गरेर एन्टिबायोटिकको उचित प्रयोगको प्रचार गरिरहेको छ। यो भनिन्छ एन्टिबायोटिक भण्डारीत्व ।
के एजिथ्रोमाइसिन वा अमोक्सिसिलिन बढी प्रभावकारी छ?
कुन औषधि अधिक प्रभावकारी छ भन्ने कुरा विचार गर्दा, यो औषधि के उपचारको लागि प्रयोग भइरहेको छ भनेर हेर्न महत्त्वपूर्ण छ। उदाहरण को लागी, संक्रमण कहाँ छ? कुन ब्याक्टेरियाले संक्रमणको कारण गरिरहेको छ? तपाईंले संकेतहरूको सूचीमा देख्न सक्नुहुनेछ, प्रत्येक एन्टिबायोटिकले संक्रमणको विस्तृत प्रकारको उपचार गर्न सक्दछ।
एउटा अध्ययन कानको संक्रमण भएका बच्चाहरूका लागि एजिथ्रोमाइसिनको एक खुराकलाई १० दिनको अमोक्सिसिलिन-क्लावुलनेट (अग्मेन्टिन) सँग तुलना गर्नुहोस्। अन्वेषकहरूले दुबै औषधिहरू प्रभावकारी र राम्रोसँग सहन गरिएको पाए।
अर्को अध्ययन ब्राजिलमा गरेको लगभग १०० बिरामीहरूलाई हेर्यो जुन क्रान्तिक अवरोधक फुफ्फुसीय रोगको संक्रामक प्रकोपको साथ हो। यस अध्ययनमा दुबै औषधि प्रभावकारी र राम्रोसँग सहन गरिएको पाए।
Claritin डी 24 घण्टा को साइड इफेक्ट
यदि तपाईंलाई ब्याक्टेरिया संक्रमण छ भन्ने लाग्छ भने, तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई जतिसक्दो चाँडो हेर्नुहोस्। ऊ वा उनीले तपाईलाई जाँच्न र मूल्या assess्कन गर्न सक्दछन्, र एन्टिबायोटिकको आवश्यकता निर्धारण गर्दछन्, र कुनचाहिँ तपाईका लागि तपाईको लक्षण र मेडिकल ईतिहासको आधारमा उपयुक्त हुन्छ, तपाईले लिने अन्य औषधिहरूको साथ जुन तपाई एजिथ्रोमाइसिन वा अमोक्सिसिलिनसँग अन्तर्क्रिया गर्नुहुन्छ।
कभरेज र एजिथ्रोमाइसिन बनाम अमोक्सिसिलिनको लागत तुलना
एजिथ्रोमाइसिन सामान्यतया बीमा योजनाहरू र मेडिकेयर भाग डी द्वारा कभर हुन्छन्। एक सामान्य पर्चे जेनेरिक जेड-पाकको लागि हुन्छ, र जेबको खर्च करिब about be। हुनेछ। एकलकेयरको साथ, मूल्य सहभागी फार्मेसीहरूमा। १० भन्दा कम सुरु हुन्छ।
आमोक्सिसिलिन पनि प्राय जसो बीमा योजना र मेडिकेयर पार्ट डी द्वारा कभर हुन्छ। एक सामान्य पर्चे am० क्याप्सूल एमोक्सिसिलिन mg०० मिग्रि को लागी हुन्छ, र जेबको मूल्य लगभग १$ डलर हुनेछ। यो सिंगलकेयर कूपनको साथ $ around को आसपास छ।
मानक खुराक १ Z-Pak (#,, २ mg० मिलीग्राम ट्याब्लेट) # ,०, mg०० मिलीग्राम क्याप्सूल
विशिष्ट मेडिकेयर पार्ट डी कोपे $ ०- $। $ ०- $ १
एकलकेयर लागत $ 8 $
एजीथ्रोमाइसिन बनाम अमोक्सिसिलिनको साझा साइड इफेक्टहरू
एजीथ्रोमाइसिनको सबैभन्दा सामान्य साइड इफेक्टहरू हुन् पखाला , मतली, र पेट दुखाई। अन्य साइड इफेक्टहरू, जुन कम सामान्य हुन्छन्, र १% भन्दा कम बिरामीहरूमा देखा पर्दछ, बान्ता, पेट फूलना, चक्कर आना, टाउको दुख्ने, निद्रा, र दाग समावेश छ।
अमोक्सिसिलिनको सबैभन्दा सामान्य दुष्प्रभाव पेनिसिलिन संवेदनशीलतासँग सम्बन्धित छ। तिनीहरूमा मतली, बान्ता, पखाला, कालो / कपालयुक्त जिब्रो, र दाग / अतिसंवेदनशीलता प्रतिक्रियाहरू समावेश छन्। घटना दरहरूसँग सम्बन्धित प्रतिशत उपलब्ध छैनन्।
सामान्यतया, एन्टिबायोटिक उपचारको साथ, तपाईं खमीर संक्रमणको लागि अधिक संवेदनशील हुन सक्नुहुन्छ। तपाइँको हेल्थकेयर प्रदायकलाई सोध्नुहोस् कि तपाइँ लिनु पर्छ भने प्रोबायोटिक ।
यो साइड इफेक्ट को पूर्ण सूची छैन। अन्य साइड इफेक्ट हुन सक्छ। सम्भावित प्रतिकूल घटनाहरूको पूर्ण सूचीको लागि तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श लिनुहोस्।
पखाला / छाडा मल हो -5-%% हो > १%
पेट दुख्ने हो २-%% हो रिपोर्ट गरिएको छैन
बान्ता हो <1% हो > १%
पुराना हो <1% हो > १%
स्रोत: डेलीमेड ( अजीथ्रोमाइसिन ), डेलीमेड ( अमोक्सिसिलिन ), एफडीए लेबल ( अमोक्सिसिलिन )।
अमिथ्रोमाइसिन बनाम अमोक्सिसिलिनको ड्रग अन्तर्क्रिया
एजिटरोमाइसिनलाई एन्टिकोआगुलेन्टसँग मिलाउँदा जस्तै वारफेरिनले रक्तस्रावलाई असर गर्न सक्छ; बिरामीहरूलाई अनुगमन गरिनु पर्छ। ड्रग अन्तरक्रिया डिगोक्सिन वा कोल्चिसिनको साथ हुन सक्छ। QT अंतराललाई लामो पार्ने औषधिहरू, निश्चित एन्टिरिथिमिक्स सहित, एजिथ्रोमाइसिन साथ लिनु हुँदैन किनभने जोखिमपूर्ण वा घातक एरिटिमियाको जोखिमको कारण छ।
वारफेरिन जस्ता एन्टिकोआगुलेन्टको साथ अमोक्सिसिलिन लिदा रक्तस्राव हुन सक्छ; बिरामीहरूलाई अनुगमन गरिनु पर्छ। अमोक्सिसिलिनको साथ संयोजनमा एलोपुरिनोलले खटिराको ठूलो घटना निम्त्याउन सक्छ।
मौखिक गर्भ निरोधकहरू, जब एन्टिबायोटिकसँग संयोजनमा लिइन्छ, कम प्रभावकारी हुन सक्छ। ब्याकअप जन्म नियन्त्रणको आवश्यकताको बारेमा तपाईको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श लिनुहोस्, जस्तै कन्डम, जब तपाईं एन्टिबायोटिकमा हुनुहुन्छ।
यो औषधी अन्तरक्रियाको पूर्ण सूची होइन। अन्य औषधि अन्तर्क्रिया हुन सक्छ। चिकित्सा सल्लाहका लागि तपाईको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श लिनुहोस्।
एक डाक्टर को भ्रमण को लागत कति हुन्छ?
औषधि ड्रग क्लास Azithromycin अमोक्सिसिलिन
एलोपुरिनोल Xanthine ऑक्सीडेस अवरोधकर्ता (गाउटको लागि प्रयोग गरिएको) हैन हो
मौखिक गर्भ निरोधक मौखिक गर्भ निरोधक हो हो
नेल्फीनावीर प्रोटीज अवरोधक हो हैन
डिजोक्सिन कार्डियक ग्लाइकोसाइडहरू हो हैन
कोल्चिसिन विरोधी स्वाद एजेन्ट हो हैन
मायलान्टा एन्ट्यासिडहरू हो हैन
सोतालोल एन्टिरिथ्यामिक्स हो हैन
Zolmitriptan अन्य औषधिहरू जुन QT अन्तराल लामो हुन्छ हो हैन
Azithromycin र amoxicillin को चेतावनी
Azithromycin को चेतावनी:
यदि तपाईलाई एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, वा कुनै म्याक्रोलाइड एन्टिबायोटिकसँग एलर्जी छ भने तपाईंले एजिथ्रोमाइसिन लिनु हुँदैन।
यदि तपाईंसँग एजिथ्रोमाइसिनको पहिले प्रयोगबाट कलेजो समस्याको ईतिहास छ भने तपाईंले एजिथ्रोमाइसिन लिनु हुँदैन।
गम्भीर एलर्जी प्रतिक्रियाहरू (एन्जियोएडेमा, एनाफिलैक्सिस, एक्यूट सामान्यीकृत एक्स्टैमेटस पुस्टुलोसिस, स्टीभेन्स-जॉनसन सिन्ड्रोम, र / वा विषाक्त एपिडर्मल नेक्रोलिसिस सहित) देखा पर्न सक्छ। दुर्घटना रिपोर्ट गरिएको छ। यदि एलर्जी प्रतिक्रिया देखा पर्‍यो भने तपाईंले औषधि तुरून्त रोक्नु पर्छ र आपतकालीन उपचार खोज्नु पर्छ।
कलेजो समस्या भएको छ, जस मध्ये केहि घातक छन्। यदि हेपाटाइटिस (थकान, पीलिया, पेट दुखाइ, खुजली) को लक्षण देखा पर्यो र एजिथ्रोमाइसिन तुरुन्त रोक्नुहोस्, र आपतकालीन उपचार खोज्नुहोस्।
शिशु hypertrophic Pyloric स्टेनोसिस नवजातहरु मा रिपोर्ट गरिएको छ (<42 days old). Contact your physician if your neonate is vomiting or has irritability when feeding.
म्याकोरोलाइड एन्टिबायोटिक, एजिथ्रोमाइसिन लगायत, क्यूटी अन्तरालको विस्तार हुन सक्छ, एरिटिमियाको जोखिम बढाउँदछ। निश्चित बिरामीहरू बढी जोखिममा हुन्छन्, एरिथमिया / टोरसेड डे पोइन्ट्स वा अन्य हृदय समस्याहरूको विरामी भएका बिरामीहरू, क्यूटी अन्तराललाई लम्बाउन सक्ने ड्रग्समा बिरामीहरू, वृद्ध बिरामीहरू, र असुरक्षित कम पोटासियम वा म्याग्नेशियमका बिरामीहरू।
एजिथ्रोमाइसिनले माईस्थेनिया ग्र्याभिसको लक्षणहरू बढाउन सक्छ वा नयाँ सुरुवातसँग सम्बन्धित हुन सक्छ।
यौन संचारित मूत्रमार्ग वा ग्रीवाइटिसका बिरामीहरूलाई सिफलिस र गोनोरियाको लागि परीक्षण गरिनु पर्छ, र यदि संक्रमण भएमा उचित उपचार गर्नु पर्छ।
यदि तपाईंलाई पेनिसिलिनमा एलर्जीको ईतिहास भएको छ भने अमोक्सिसिलिन प्रयोग नगर्नुहोस्।
गम्भीर, कहिलेकाँही घातक अतिसंवेदनशीलता प्रतिक्रियाहरू (anaphylaxis) रिपोर्ट गरिएको छ। यो बिरामीहरुमा हुन सक्दछ जो cephalosporins को उपचार गरीरहेका छन् (जस्तै सेफ्लेक्सिन ), पनि। यदि त्यहाँ पहिलेको प्रतिक्रिया आएको छ भने बिरामीहरूलाई एमोक्सिसिलिन तोक्नु हुँदैन। यदि एक एलर्जी प्रतिक्रिया देखा पर्‍यो भने, अमोक्सिसिलिन रोक्नुपर्दछ र तपाइँले आपतकालीन उपचार खोज्नु पर्छ।
दुबै एजिथ्रोमाइसिन र एमोक्सिसिलिनका लागि चेतावनी:
क्लोस्ट्रिडियम मुश्किल -सोसिएटेड डायरिया प्राय एन्टिबायोटिकको साथ रिपोर्ट गरिएको छ र हल्का दस्तबाट घातक कोलाइटिससम्म गम्भीरतामा हुन सक्छ। यो एन्टिबायोटिक प्रयोगको समयमा वा पनी हुन सक्छ, केहि महिना पछि। तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई तुरून्त सम्पर्क गर्नुहोस् यदि तपाईंले अतिसार, मतली, पेटको दुखाइ, र / वा ज्वरो अनुभव गर्नुभयो।
Azithromycin वा amoxicillin मात्र एक ब्याक्टेरिया संक्रमण को उपचार गर्न प्रयोग गर्नु पर्छ। ब्याक्टेरिया संक्रमण नभएको बेला एन्टिबायोटिक प्रयोग गर्दा (जस्तै फ्लू वा साधारण चिसो, जो भाइरल इन्फेक्सन हो) ले बिरामीलाई फाइदा गर्दैन र प्रतिरोध निम्त्याउन सक्छ।
एजीथ्रोमाइसिन बनाम अमोक्सिसिलिनको बारेमा प्राय: सोधिने प्रश्नहरू
एजीथ्रोमाइसिन भनेको के हो?
एजिथ्रोमाइसिन एक म्याक्रोलाइड एन्टिबायोटिक हो जुन वयस्कहरू र बच्चाहरूमा बिभिन्न जीवाणु संक्रमणको उपचारको लागि प्रयोग गरिन्छ। एक सामान्य पर्चे Zithromax Z-Pak को लागी हो। अन्य म्याक्रोलाइड एन्टिबायोटिकहरू जसको बारेमा तपाईंले सुन्नुभएको हुन सक्छ एरिथ्रोमाइसिन र बियाक्सिन (क्लेरिथ्रोमाइसिन)।
अमोक्सिसिलिन पेटासिलिनसँग सम्बन्धित बिटा-लैक्टम एन्टिबायोटिक हो, जुन वयस्कहरू र बच्चाहरूमा विभिन्न प्रकारका जीवाणु संक्रमणको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ। अमोक्सिसिलिन एक धेरै साधारण औषधि हो, र अग्मेन्टिन (जसमा प्रतिरोध रोक्नको लागि एमोक्सिसिलिन प्लस क्लावुलानेट हुन्छ) बिभिन्न जीवाणु संक्रमणको लागि निर्धारित अर्को सामान्य औषधी हो।
के एजीथ्रोमाइसिन र अमोक्सिसिलिन एकै हो?
दुबै औषधी वयस्कहरू र बच्चाहरूमा ब्याक्टेरियाको संक्रमणको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ। एजिथ्रोमाइसिन एन्टिबायोटिक्सको म्याक्रोलाइड कोटीमा छ, जबकि अमोक्सिसिलिन बिटा-लैक्टम / पेनिसिलिन कोटीमा छ। तिनीहरू बिभिन्न तरीकाले कार्य गर्दछन् र केहि भिन्नताहरू छन्, जस्तै संकेत र लागुपदार्थ अन्तर्क्रियामा।
के एजिथ्रोमाइसिन वा अमोक्सिसिलिन राम्रो छ?
जबकि दुबै औषधिहरू प्रभावकारी छन्, तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई हेर्न उत्तम हुन्छ कि कसले निर्धारण गर्न सक्दछ यदि तपाईंलाई वास्तवमा ब्याक्टेरिया संक्रमण छ भने। भाइरल संक्रमणले एन्टिबायोटिकलाई जवाफ दिदैन र औषधि प्रतिरोध क्षमता बढाउन सक्छ। संक्रमणको प्रकारको आधारमा, र कुन खास ब्याक्टेरियाले संक्रमणको कारण गर्दछ, तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले निर्णय गर्न सक्दछन् कि यी औषधीहरू मध्ये कुनै एक तपाईंको लागि उपयुक्त छ कि छैन।
के म गर्भवती हुँदा अझिथ्रोमाइसिन वा अमोक्सिसिलिन प्रयोग गर्न सक्छु?
यदि तपाई गर्भवती हुनुहुन्छ र एन्टिबायोटिक चाहिएको छ भने तपाईको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले प्रयोग गर्न उत्तम एन्टिबायोटिक निर्धारण गर्दछ। Azithromycin एक हो गर्भावस्था कोटि B , तर गर्भवती महिलाहरूमा राम्रोसँग नियन्त्रित अध्ययन भएको छैन। अमोक्सिसिलिन पनि एक हो गर्भावस्था कोटि B , र एजिथ्रोमाइसिन जस्तै, गर्भवती महिलाहरूसँग पर्याप्त अध्ययन गरिएको छैन। त्यसकारण, यदि आमालाई फाइदा छ भने बच्चालाई जोखिम बढी हुन्छ र स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको नजिकबाट अवलोकन गरिन्छ भने, एजिथ्रोमाइसिन वा एमोक्सिसिलिन तोकिनु पर्छ।
के म एक्सीथ्रोमाइसिन वा अमोक्सिसिलिन रक्सीको साथ प्रयोग गर्न सक्छु?
जबकि निर्माताको जानकारीले रक्सीलाई एन्टिबायोटिकलाई contraindication को रूपमा सूचीबद्ध गर्दैन, यो महत्त्वपूर्ण छ नोट लिनुहोस् त्यो रक्सीले तपाइँको शरीरलाई संक्रमणसँग लड्न रोक्न सक्छ। रक्सीले गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइड इफेक्टलाई पनि नराम्रो बनाउन सक्छ।
के एजिथ्रोमाइसिन अमोक्सिसिलिन भन्दा मजबूत छ?
शक्ति तुलना गर्न गाह्रो छ किनकि प्रत्येक औषधी एन्टिबायोटिकको बिभिन्न कोटीमा छ। उनीहरूसँग केहि समानताहरू र केही भिन्नताहरू छन्, तर हामी वास्तवमै भन्न सक्दैनौं कि कुन मजबूत छ। यसको सट्टा, कुन संक्रमणले उपचार गरिरहेको छ, कुन ब्याक्टेरियाले संक्रमण गराइरहेको छ, र तपाईसँग भएको कुनै पनि अन्य स्वास्थ्य अवस्था र कुनै पनि औषधि जुन तपाईले एजिथ्रोमाइसिन वा अमोक्सिसिलिनसँग अन्तर्क्रिया गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने कुरा हेर्नु महत्त्वपूर्ण छ। तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले निर्धारित गर्न सक्दछ कि कुन औषधि तपाईंको लागि उपयुक्त छ।
साइनस संक्रमण, अमोक्सिसिलिन, वा एजिथ्रोमाइसिनका लागि कुनचाहिँ उत्तम छ?
साइनस संक्रमण भाइरस वा ब्याक्टेरिया (वा कुनै फ fun्गस, दुर्लभ मामिलाहरूमा) को कारणले हुन सक्छ। यदि तपाईंको प्रिस्क्रिबरले तपाईंलाई ब्याक्टेरियस साइनस संक्रमणको साथ निदान गर्छ भने, एजिथ्रोमाइसिन वा एमोक्सिसिलिन (वा अग्मेन्टिन) उपयुक्त, र धेरै सामान्य, उपचारहरू। तपाईको प्रिस्क्रिबरले एलर्जी र तपाईले लिनुहुने अन्य औषधिहरू पनि ध्यान दिनेछ जुन अझिथ्रोमाइसिन वा अमोक्सिसिलिनसँग अन्तर्क्रिया गर्दछ।
कुन एन्टिबायोटिक खोकीको लागि उत्तम हो?
यो निर्भर गर्दछ यदि तपाइँको खोकी ब्याक्टेरिया वा भाइरल संक्रमणबाट आएको हो। यदि तपाईंलाई सामान्य चिसो जस्तो भाइरल संक्रमण छ भने, एन्टिबायोटिकले केही पनि सहयोग गर्दैन। यदि तपाईको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई लाग्छ कि ब्याक्टेरियाको संक्रमणले खाँसीको कारण हो, ऊ वा उनीले एन्टिबायोटिक छनौट गर्नेछन् जुन उनलाई लाग्छ विशेष संक्रमणको सम्भावना बढी हुन्छ।
म कसरी छिटो रक्तचाप कम गर्न सक्छु
के तपाइँ पेशाब औषधि परीक्षण मा गलत सकारात्मक हुन सक्छ
कसरी एक डाक्टर को लागी नि: शुल्क हेर्न को लागी
प्लेटलेट युक्त प्लाज्मा (पीआरपी) थेरापी लागत